Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalladii ugu dambeeyay ee laga sameeyay Muqdisho lagu guuleystay in lagu qabto rag dilal ka geystay Muqdisho. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo sigaar ah ula hadlay Radio Dalsan ayaa sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyay dilka Askari ka tirsanaa Ciidamada dowladda oo lagu dilay Muqdisho. Waxa uu sheegay in markii uu dilka dhacay ay durba Ciidamadu sameeyeen howlgal kaas oo keenay in isla Goobta lagu qabto ninkii ka dameeyay dilka Askarigaas. – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalladii ugu dambeeyay ee laga sameeyay Muqdisho lagu guuleystay in lagu qabto rag dilal ka geystay Muqdisho.
Afhayeenka u hadlay Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyay dilka Askari ka tirsanaa Ciidamada dowladda oo lagu dilay Muqdisho.
Waxa uu sheegay in dhawaan Gacan ku dhiiglaha ay soo gudbin doonaan Magaciisa isla markaana ay Maxkamada horgeyn doonaan si cadaalad loo marsiiyo sid uu hadalka u dhigay.
Labadii Maalmood ee la soo dhaafay ayaa Muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorsheysan,waxana shalay degmada Hodan lagu dilay Xidigle ka tirsanaa Ciidamada Milateriga oo lagu Magacaabi jiray Farxaan Barkhad.